ब्लग : क्‍वारेन्टाइन लभ- विविधा - कान्तिपुर समाचार
चैत्र १४, २०७६ श्रद्धा श्रेष्ठ
काठमाडौँ — बिहान उठ्यो अनि फोन हेर्‍यो अनि फेरि सुत्यो, १२ बजे फेरि मन नलागी नलागी उठ्यो, सधैं सुत्न पाए पनि हुन्थ्योजस्तो लाग्ने मलाई आजकल सुत्न पनि अल्छी लाग्दैछ ।
नपाउँदा मात्र चिज हुने हरेक बस्तु जस्तै यो क्वारेन्टाइनको अवधि निस्सासिएजस्तै हुँदै छ ।
म मान्छे कम, उल्लु बढी भएकी थिएँ । दिनभरी सुत्थे अनि रातभरी जाग्राम, जानसक्ने भनेकै फेसबुकबाट इन्स्टा, इन्स्टाबाट युट्युब थियो । ट्विटर म खासै चलाउदिन थिएँ ।
घरभित्रै बसेर होला मेरो अनुहारले राम्री हुन पाएको थिएन, त्यसैले क्वारेन्टाइनको चौथो दिन अलि जाागर चलाएर मेकअप गरें अनि एउटा फोटो हालें फेसबुकको स्टोरीमा । सबैलाई लागेको हुँदो हो त्यो एक्लोपन, घर भित्र थुनिदा ! मेरो स्टोरीमा रिप्लाइ आउन थाले, ‘कति राम्री’, ‘स्टे सेफ’ । अनि केही पान आकारका मुटुहरु । खासै टाइमलाइनको फोटोमा समेत कमेन्ट नगर्ने म त्यो दिन एक–एक स्टोरीमा रिप्लाइ गर्दै थिएँ । खासै काम केही थिएन पनि ।
त्यही कमेन्टभित्र एउटा कमेन्ट थियो । ‘यु लुक सो प्रिटी’ उसको प्रोफाइल खोलेर हेरी हालें । हाँसेको मुहार अनि मिलेको दन्तलहर, मेरो आँखाले त्यो अनुहार एक नजरमा कैद गरिहाल्यो, हामी त फेसबुकमा साथी रहेछौं, उ लबकमा बस्दो रहेछ । डल्लासबाट ५ घण्टाको ड्राइभ । अनि म्यासेजबक्स खोलेर हेरें । एकचोटी काम बिशेषले कुरा पनि भएको रहेछ, अलि माथि स्क्रोल गर्दा देखें, मैले २ बर्ष अगाडि ‘भाइ’ भनेको रहेछु ।
त्यतिबेला मलाई दिदी हुने खुबै भूत सवार थियो, मन एकछिन खिन्न भयो, तैपनि एउटा म्यासेज लेख्दे– ‘दिदी पनि भन्छौ फ्लर्ट पनि गर्छौ ?’
उताबाट तुरुन्तै जबाफ आयो, ‘पहिला दिदी हो किजस्तो लागेको थियो, हैन रैछौं ।’ उसले एक्कासी सम्बोधन हजुरबाट तिमीमा झार्‍यो ।
हैन मलाई दिदी नै भन...’ हाँसेको इमोजीसहित पठाइदिएँ ।
‘ठीकै छ नि... प्रियंका पनि आयुषमानको दिदी नै थिइन् ।’ उसले लेख्यो ।
हाम्रो संवाद एकबाट दुई हुँदै तीन घण्टा भएको पत्तै पाइनँ । घर परिवार पढाई अनि प्रेमसम्मका कुरामा आइपुग्दा उसँगको कुनै पनि संवाद कतै बोरिङ लागेन ।
‘ल अब एक बजेछ... सुत्छु है म’ मेरो म्यासेज उता नपुग्दै उत्तर आयो– ‘आज २ बजे सुत न, कस्तो ठ्याक्कै टाइममा आउने निद्रा हो ?’
उसको मिठो अनुरोधलाई नकार्न मनले मानेन, हुन त दिनभरी सुतेर निद्रा लागेको पनि थिएन ।
‘ब्रेकअप कहिले भएको ?’
मेरो अचानकको यो प्रश्नमा उसको जवाफ– ‘कहाँबाट आयो ब्रेकअपको कुरा ?’
‘सिम्पल... रातभर निद्रा नलाग्नुको मतलब बेचैन छौ । अनि कहिले नबोलेको केटिसँग अझै कुरा गर्न खोज्नु कसैलाई जान्न खोज्दैछौं ।’
‘ल भन कति वर्ष भयो छुटेको ?’ उताबाट रिप्लाई आयो– ‘तिमी एकदम बाठी छौ ।’ अनि मेरो प्रश्नको उत्तर– ‘३ बर्षजस्तो भयो, नेपाल हुँदा थिई एउटी, लंग डिस्ट्यान्स चलेन । त्यसपछि पढाई काम भनियो खासै ध्यान दिइएन । मन एकचोटी टुटेपछि जोड्न सारै गारो हुने रहेछ, घाउहरु भरिदै जाँदा फेरि त्यही दुख्ने डरले त्यो कुरालाई आफूसम्म पुग्न दिइनँ ।’
तीन घण्टा अगाडिसम्म नितान्त पराइ अन्जान मान्छे अब केही चिनेजस्तो लाग्दै थियो, केही पल अघिसम्म उसको नाम थाहा थिएन । अहिले उसको घर, थर, पढाई अनि पराइ भएकी उसकी प्रेमिका... उसका सपना बाल्यकालका केही किस्साले एक्कासी म कहिंकतै उसको जीवनको एउटा हिस्सा बन्दै थिएँ ।
केटोमा दम थियो । अलि हकी स्वभावकी भएकाले मसँग बोल्न धेरै डराउथे । उ भने मजाले हाम्रो संवादलाई रमाइलो बनाउँदै थियो ।
‘३ः३० भएछ अबचाहिं सुत्नु पर्छ ।’
‘हुन्छ... धन्यवाद । आज आफ्नो निद्रा मार्नु भएकोमा ।’
मैले एउटा हाँसेको इमोजीले त्यो रातको संवादलाई टुङ्ग्याएं ।
भोलिपल्टबाट मेरो क्वारेन्टाइन बेग्लै भयो, उसँगको म्यासेजबाट सुरु भएको मेरो दिन रात पर्दासमेत चल्दै थियो । क्वारेन्टाइनको पाँचौ दिन किन यो घर भित्र बस्नु परेको जस्तो लागेन ।
कतै केही बनावटी थिएन हाम्रो संवाद ।
छैठौं दिनको साँझतिर उसले आफ्नो गिटारमा एउटा गीत गाएर पठायो– ‘सुन है... म कहिले काही गाउँछु ।’
‘थाकेको यो नजरमा, आशु नदेउ प्रिय
चाहन्छु म तिमीलाई नै, बिन्ति बुझ न ओ प्रिय...’
उसको आवाजले मनको हरेक कुनालाई स्पर्श गर्‍यो । उसले मनबाट गएको भएर होला कति पछि त्यो गीत त्यो आवाज मेरो पनि मनले सुन्दै थियो । मैले २० चोटीभन्दा बेसी त्यो गीत सुनें, हरबार मुटुमै छुन्थ्यो । मानौं उ कसैलाई छियाछिया भएको मुटुलाई अझै चिरेर भन्दै थियो– अब नदुखाऊ अब दर्द सहन सक्दिनँ ।
मैले धीत मरुन्जेल गाना सुनेपछि उसलाई मेसेज गरें– ‘तिम्रो आवाज कस्तो मिठो, सधैं गाउ है ।’
ऊ मक्ख पर्‍यो सायद एउटा मक्ख परेको इमोजीसहित धन्यवाद पठायो । गीत गाउँदा यति मिठो सुनिने आवाज फोनमा कस्तो सुनिएला है ? मैले उसको फोन नम्बर घुमाउरो पाराले मागें, उसले नम्बर दियो ।
सिधै फोन लगाएँ, म्यासेज मिठो थियो । आवाज मह थियो तर फोनमा अलि रुखो सुनियो जस्तो लाग्यो । पहिलो फोन संवाद भएर होला अलि अनौठो लाग्दै थियो, ३ मिनेट बोलेपछि मैले फोन काटिदिएँ ।
र, टाइप गरें, ‘तिम्रो स्वर शब्दभन्दा धेरै फरक रहेछ ।’
‘मैले पास गरिन कि के हो .. यो मौखिक परीक्षा ?’
‘अँ अलि गारो भयो, हाहा ...’ मैले यती मात्र पठाएँ ।
उताबाट उत्तर आयो, 'पास गर्न डल्लास आउनु पर्ने हो ?'
‘लकडाउन छ कसरी आउछौ ?’
‘सकिएपछि आउँछु... तिमीलाई भेट्न, भेट्छेउ ?’
मलाई खासै फेसबुके साथी, प्रेममा विश्वास लाग्दैन । अझ मेरो विश्वास त्यो दिनबाट उडेको थियो, जब एकजना फेसबुकमा चिनेको मान्छेलाई ४ वर्ष अगाडी भेट्‍न गएकी थिए, फोटोमा राम्रै थियो, अगाडि देख्दा सातै गएर भागेर आएकी थिएँ ।
त्यही डरले हो या उसलाई हेर्ने रहरले मैले म्यासेन्सरमा एउटा मेसेज पठाएँ– ‘भिडियो अन गर ।’ अनि कल गरें ।
मेरो प्रफुलित मन त्यहीबेला ढक्क फुल्यो, जब अर्को पट्टि मैले त्यो अनुहार देखें, आँखाले एकटक एकोहोरो हेरिरहृयो, मेरो हेराइ केही असहज लाग्यो उसलाई । उसका दुवै कान राता हुँदै थिए, कहिले लजाएर फोन सिलिङतिर फर्काउथ्यो त कहिले आफूतिर ।
म भने कुनै केटाले पहिलोपटक राम्री केटी देखेजस्तै आँखा नै नझिम्काइ उसैलाई हेर्दै थिएँ एकोहोरो । केही मिनेटको हेराइपछि अलि सहज भयो, धेरै अगाडिबाट चिने जस्तै कुरा हुन लागे, भविष्यमा प्लान के छदेखि सबै कुरा साटिदै जाँदा मन सटिन थालेको पत्तै भएन । भेटन रहर हुँदाहुँदै लकडाउनको चपेटामा परेका हामी फोन, टेक्स्ट हुँदै भिडियो कलमा क्वारेन्टाइनका दिन बिताउदैछौं ।
'काली ! तिम्रो ओठमाथिको तिलमा दिल बस्यो' हिजो भिडियोकलमा उसले यती भन्दा म लजाए मात्र । उसलाई के थाह, उसको आवाजमा, आँखामा गालाको सानो कोठीमा, लजाउदै बोल्ने बोलीमा अनि उसले साचेको भोलिमा यो दिल फसिसकेको छ ।
अब बस् यो लकडाउन खुलोस् । यो क्वारेन्टाइन सकियोस् अनि भेट्न पाउँ । उही मेरो क्वारेन्टाइनको मायालाई । अनि भन्न पाउँ– ‘तिमी यो दिल भित्र सधैको लागि लकडाउन भइदेउ न है ।’ प्रकाशित : चैत्र १४, २०७६ १६:४७
युद्ध, आंतकवाद र प्राकृतिक प्रकोपले क्रिकेट रोकिएको इतिहास नभएको होइन तर अहिले जत्तिको शून्यकै स्थितिमा भने झरेको थिएन ।
चैत्र १४, २०७६ दिप्ती अननी
(नयाँ दिल्ली) — क्रिकेट विश्वभर अहिलेमात्र रोकिएको होइन, यसअघि पनि रोकिएका छन्, युद्ध, आतंकवाद र प्राकृतिक प्रकोपका कारण । यी वास्तवमै विचित्रका समय हुन् । अहिले पूरा विश्व कोरोना भाइरस (कोभिड १९) को संक्रमणबाट त्रसित छ । सबैको जीवन ठ्याक्कै रोकिएको छ । यसमा विश्व क्रिकेट पनि पर्छ । केही साताअघिसम्म पनि क्रिकेट खेलिएको थियो, बन्द रंगशालामा । त्यो पनि दर्शकविहीन स्थितिमा । त्यतिबेला छक्का प्रहार हुँदा दर्शकदीर्घा चुप रहेको थियो ।
त्यतिबेला खेलाडी आफैंले बल लिन जानुपरेको थियो तर अहिले त्यो स्थिति पनि रहेन । विश्व क्रिकेट ठ्याक्कै रोकिएको छ । यस्तो भएको पहिलोपल्ट भने होइन । युद्ध, आंतकवाद र प्राकृतिक प्रकोपले क्रिकेट रोकिएको इतिहास भए पनि अहिले जत्तिको शून्यकै स्थितिमा झरेको थिएन । सन् १९१४ अगस्टको महिना । पहिलो विश्वयुद्ध सुरु भएपछि त्यसमा इंग्ल्यान्ड पनि सहभागी भयो ।
त्यस्तो स्थितिमा काउन्टी क्रिकेट केही समयका लागि चल्न त चल्यो तर पूरा हुन सकेन । खेल चलिरहेकै बेला खेलाडीलाई बोलाउने काम भएको थियो, युद्धमा सहभागी हुनका लागि । देशको स्वार्थका लागि भनेर त्यतिबेला पूरा क्रिकेट सिजन रोकिएको थियो । डब्लू जी ग्रेसले त्यतिबेला लेखेका थिए, ‘समय यस्तो आएको छ, हामीले क्रिकेट रोक्नैपर्छ । यस्तो स्थितिमा क्रिकेट खेलिरहनु ठीक हुन्न, यसले कसैलाई पनि खुसी दिन्न ।’
त्यतिबेला पहिलो श्रेणीको क्रिकेट इंग्ल्यान्डमा पक्कै पनि हुन सकेन । केही मैत्रीपूर्ण र अर्थ संकलनका लागि खेल भने भइरहे । जस्तो आर्मीका केही टिमबीच खेल भयो । दोस्रोपल्ट विश्व क्रिकेट त्यतिबेला रोकियो, जतिबेला दोस्रो विश्वयुद्ध सुरु भयो । युद्ध सुरु हुनु ठीकअगाडि इंग्ल्यान्ड र वेस्ट इन्डिजबीच टेस्ट सिरिज चलिरहेको थियो । सिरिजको तेस्रो तथा अन्तिम खेल हुने तय थियो, द ओभलमा । समय थियो, सन् १९३९ को अगस्ट ।
तर युद्ध सुरु हुने निश्चित भएपछि वेस्ट इन्डिजले आफ्नो टिमलाई फिर्ता बोलायो । ओभल मैदान युद्धबन्दीलाई राख्न प्रयोग हुन थाल्यो । इंग्ल्यान्डमा दोस्रो विश्वयुद्धले क्रिकेट हुन सकेन तर अरू खेल भने भइरहे । लर्ड्समा लगातार खेल भइरहे, ती खेल हेर्न दर्शकको घुइँचो पनि कायमै रह्यो । लन्डन र यसका वरिपरिका केही स्थामा बमवर्षा भइरहँदा पनि लर्ड्समा भएका केही खेल रोकिएनन् । यस्तो गज्जबको स्थिति थियो ।
सन् १९४४ मा जर्मनीले लन्डनलाई निशाना बनाएर हवाई आक्रमण सुरु गरेको थियो । जुलाई २९ को त्यो दिन भएको खेलमा वाली हमान्डेले आर्मी टिमका लागि खेलेका थिए । दर्शक संख्या थियो, ३ हजारजति । एक घण्टाको खेलमा मिडलसेक्सका ब्याट्सम्यान ज्याक रोबर्टसन आर्मीको तर्फबाट क्रिजमा उत्रिए । उनीविरुद्ध बलिङमा थिए, बब वयाट । ठीक त्यही बेला उनीहरूले सूचना पाए, लर्ड्सवरिपरि बम खस्न बेर छैन ।
खेलाडी मात्र होइन, सबै दर्शक भुइँमा मुख फर्काएर घोप्टो परे तर भाग्यवश बम केही पर खस्यो । धुवाँको मुस्लोले केही समय त खेल बिथोलियो तर रोकिएन । खेल फेरि सुरु भयो । लगत्तै रोबर्टसनले वयाटको बलमा लामो छक्का प्रहार गरे । बल दर्शकदीर्घासम्म पुगेको थियो ।
सन् १९६८ मा इंग्ल्यान्ड टिमको दक्षिण अफ्रिका भ्रमण रद्द गरिएको थियो । कारण थियो, दक्षिण अफ्रिकाका अल्पसंख्यक श्वेत सरकारको रंगभेदी नीति । यसै कारण दक्षिण अफ्रिका नजान इंग्ल्यान्डलाई ठूलो दबाब थियो । खेल सुरु हुनु केही दिनअगाडि मात्र भ्रमण रद्द गरिएको थियो । यहींबाट सुरु भयो, विश्व क्रिकेटबाट दक्षिण अफ्रिकाको बहिष्कार ।
यो नीति २० वर्षसम्म कायम रह्यो । सन् २००४ को बक्सिङ डेको दिन श्रीलंका सुनामीको सिकार बन्यो । लगभग ३५ हजारले ज्यान गुमाए, लाखौं घरबारविहीन भए । निकै आकर्षक गेल अन्तर्राष्ट्रिय रंगशाला त्यो सुनामीको कारण क्षतविक्षत स्थितिमा पुग्यो । यो रंगशालाको एकछेउमै थियो, समुद्र ।
त्यतिबेला श्रीलंकाली टिम न्युजिल्यान्ड भ्रमणमा थियो । उसले ५ एकदिवसीय सिरिजको पहिलो खेल खेलिरहेको थियो । आफ्नो देशमा आएको प्राकृतिक प्रकोपबीच न्युजिल्यान्डमा खेलिरहनु श्रीलंकाले ठीक मानेन । आफ्नै परिवार र साथी खराब समयमा रहेका बेला क्रिकेट ठूलो भएन । त्यसैले खेलाडीले आफ्नो देश फर्कनु नै ठीक माने । सन् २००७ को डिसेम्बरमा गेल मैदानम पूर्ववत: स्थितिमा आयो । श्रीलंकाले त्यहाँ भएको पहिलो खेलमा आतिथ्यता गरेको थियो इंग्ल्यान्डको ।
सन् २००९ मा तेस्रो टेस्टको दोस्रो दिनको खेलका लागि श्रीलंका लाहोर स्टेडियमतर्फ गइरहेको थियो । टिम–बस रंगशाला पुग्नैमात्र लागेको थियो, १२ बन्दुकधारीले बसमाथि आक्रमण गरे । त्यस क्रममा ६ खेलाडी घाइते भए । यो आतंककारी आक्रमण थियो । सन् १९८७ र १९९३ मा श्रीलंकामा भएका बम बिस्फोटनका कारण न्युजिल्यान्ड त्यहाँ जान मानेको थिएन तर यसपल्ट खेलाडी रहेको बसमाथि पहिलोपल्ट सिधा आतंककारी आक्रमण भएको थियो ।
त्यसपछि त कुनै पनि टिम पाकिस्तान जान तयार भएनन् । बल्लतल्ल सन् २०१९ मा मात्र कुनै ठूलो विदेशी टिम पाकिस्तान जान तयार भयो । यो संयोगले श्रीलंका टिम नै थियो । श्रीलंकाले पाकिस्तानमा दुई टेस्टको सिरिज खेलेको थियो । यसले देखाउन खोजेको थियो, अब पाकिस्तानमा पनि विदेशी टिमले क्रिकेट खेल्न सक्छ । सन् २०१९ मै मात्र पनि बंगलादेशको टिम न्युजिल्यान्ड भ्रमणमा रहेका बेला यस्तै एउटा आतंककारी आक्रमण भयो ।
एक बन्दुकधारीले मार्च ५ को दिन मस्जिदमा आक्रमण गरेको थियो । त्यसमा परेर ५१ जनाको मृत्यु भयो । त्यसको भोलिपल्टै बंगलादेशले क्राइस्ट चर्चमा पहिलो टेस्ट खेल्ने कार्यक्रम थियो । त्यही मस्जिदमा शुक्रबारको प्रार्थनाका लागि बंगलादेशी खेलाडी जाने कार्यक्रम पनि थियो । खेलाडी मस्जिदसम्म जाने बसमा बसिसकेका थिए । त्यही बेलुका बंगलादेशको भ्रमण रद्द भयो ।
यसपालि भने कोरोना भाइरसका कारण अविश्वसनीय रूपमा रोकिएको छ, विश्व क्रिकेट ।
प्रकाशित : चैत्र १४, २०७६ १६:३९